हाइब्रिड रिलीजको तयारीमा सलमान खानको ‘अन्तिम’ फिल्म
नेपाली पब्लिक आइतबार, भदौ २७, २०७८
राधेपछी बलिउड स्टार सलमान खानको फिल्म ‘अन्तिम’ रिलिजको तयारीमा छ। ५ दिन अघि ट्रेलर रिलिज गरेको ‘अन्तिम’को गत बिहिवार गीत रिलिज भएको थियो, विघ्नहर्ता।
‘गैगंस्टर ड्रामा’को रुपमा निर्माण गरिएको यो एक्सन फिल्मको ट्रेलर र गीत ‘विघन्हर्ता’ले यूट्युबमा राम्रै ‘भ्युज’ पाइरहेको छ। आधिकारीक रुपमा रिलिज मिती भने सार्वजनिक नगरिएको भए पनि फिल्म आउँदो अक्टोबर १५ मा रिलिज हुने चर्चा छ।
यसैविच फिल्मको रिलिजको विषयमा ‘ट्वीस्ट’ आएको छ। लेट्सओटिटि डट कमले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमा फिल्म ‘अन्तिम’को बारेमा आइतबार गरेको ट्वीटले ट्वीस्ट ल्याएको हो। लेट्सओटिटि डट कमले ट्वीटरमा अन्तिमको हाइब्रिड रिलीज गरिने बताइएको छ।
Salman Khan and Aayush Sharma starrer #Antim is gearing up forahybrid release in Zee5 and Single screen theatres simultaneously.
Expected release date - October 15th. pic.twitter.com/0ktNh4j40A
— LetsOTT GLOBAL (@LetsOTT) September 12, 2021
यसअघिको फिल्म राधे विभिन्न ओटिटि (डिजिटल प्लेटफर्म)मार्फत रिलिज भएको थियो। यसपटक ‘अन्तिम’ भने ओटिटिसँगै सिनेमा हलहरुमा पनि रिलिज गर्ने तयारी भइरहेको अड्कलबाजी बलिउडमा छ। मल्टिप्लेक्समा भने फिल्म रिलिज हुने सम्भावना निकै न्युन छ।
फिलमा सलमानसँगै उनका ज्वाई आयुष शर्माको पनि अभिनय छ। अन्तिममा सलमान एक सरदारको भुमिकामा देखिनेछन्। फिल्मको निर्देशन महेश मान्जेरकरले गरेका छन्। फिल्मलाई मराठी फिल्म ‘मुलशीडको रिमेक बताइन्छ। मुलशी २०१८ मा बनेको सुपरहिट फिल्म हो। फिल्मको निर्माता सलमान खान र उनका ज्वाई आयुष स्वयम् हुन्।
#राधे #बलिउड-स्टार #सलमान-खान #फिल्म #अन्तिम #विघ्नहर्ता
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८ २२:०५